मेलमिलाप कंकालिनी प्राविको २४ औं अभिभावक दिवस सम्पन्न ।
रेडियो धादिङ, धादिङ असोज २२ । धादिङको निलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा रहेको मेलमिलाप कंकालिनी प्राथमिक विद्यालयले आज २४ औं अभिभावक दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाएको छ । कार्यक्रमको अवसरमा बैशाख १२ गतेको भुकम्प पछि
अन्र्तव्यक्ती संञ्चार परामर्श तालिम सकियो ।
रेडियो धादिङ धादिङ असोज २१ । मङ्गलबारदेखी धादिङको सदरमुकाम धादिङवेशींमा संञ्चालित स्वास्थ्य कार्यकर्ताको लागी अन्र्तव्यक्ती संञ्चार परामर्श तालिमको विहिबार एक कार्यक्रमका विच समापन गरिएको छ । तालिममा जिल्ला अस्पताल धादिङ र विभिन्न १३ ओटा स्वास्थ्यचौकीका स्वास्थ्य
विश्व दृष्टि दिवश ।
रेडियो धादिङ, धादिङ असोज २१ । विश्व दृष्टि दिवस धादिङ सहित देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईएको छ । प्रत्येक वर्ष अक्टोबर महिनाको दोस्रो बिहीबार नेपाल लगायत विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिएको छ । सबैका लागि आँखा
भारतले नाकाबन्दी हटायो, सोमबारबाट इन्धन नेपाल पठाउने
असोज १६ भारतले झण्डै दुई सातादेखि नेपालमाथि लगाएको अघोषित नाकाबन्दी हटाएको छ । उसले सोमबारबाट इन्धन आपूर्ति सहज बनाउने आश्वासन दिएको छ । नेपालका घोषित र अघोषित दूतहरुले दिल्लीमा गरेको उच्चस्तरीय भेटवार्तापछि भारत नेपालतर्फको आपूर्ति व्यवस्था सहज
आर्थिक पत्रकारीता तालिम सम्पन्न ।
रेडियो धादिङ, धादिङ असो १७ । वित्तिय शुसाशन र प्रवद्र्धन धादिङ सञ्चारको अभियान भन्ने नारा सहित सहकारी संस्थाहरुको क्षमता विकासको लागी सुरु भएको आर्थिक पत्रकारिता तालिम शनिबार सम्पन्न भएको छ । जिल्ला
आर्थीक पत्रकारीता तालिम सुरु !
रेडियो धादिङ,धादिङ असोज १४ । वित्तिय शुसाशन र प्रवद्र्धन धादिङ सञ्चारको अभियान भन्ने नारा सहित सहकारी संस्थाहरुको क्षमता विकासको लागी आर्थिक पत्रकारिता तालिम आजदेखी धादिङवेशीमा सुरु भएको छ । डिभिजन सहरकारी संस्था लिमिटेड धादिङका अधिकृत कृष्ण
ट्रिपरको ठक्करबाट ३ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु ।
रेडियो धादिङ,धादिङ असोज १४ । पृथ्वीराजमार्ग अन्र्तगत थाक्रे गाउँ विकास समिति वडा नम्बर ३ महादेबेसीमा ट्रिपले ठक्कर दिदा तीन जनाको घट्ना स्थलमै मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा परी अन्य ४ जना गम्भिर घाईते भएका छन् ।
पत्रकार महासंघ धादिङ शाखालाई संविधानको छायाँकपी ।
रेडियो धादिङ, धादिङ,असोज १३ । संविधान जारी गर्न पत्रकारले डायरी र कलम दिएर प्रदान गरेको जिम्मेवारी पुरा गर्दै धादिङ्गका सभाषदहरुले पत्रकार महासंघलाई संविधानको छायाँकपी दिनुभएको छ । बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघ धादिङ्गको नवनिर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रममा
नयाँ संविधान विश्वकै सबैभन्दा बढी समावेसी : नेम्वाङ
रेडियो धादिङ, धादिङ,असोज १३ । नयाँ संविधान विश्वकै सबैभन्दा बढी समावेसी भएको व्यावस्थापिक सांसदका सभाभुख सुवास चन्द्र नेम्वाङले दावी गर्नुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ धादिङको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन तथा बार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले
भारत असन्तुष्ट छैन ।
रेडियो धादिङ, धादिङ, असोज १३ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको १० दिन पछि दक्षिणी छिमेकी भारतले नेपालमा संविधान जारी भएकोमा आफू असन्तुष्ट र बेखुसी नरहेको औपचारिक रुपमा जनाएको छ । नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले आज
नयाँ संविधान विश्वकै सबैभन्दा बढी समावेसी भएको सभामुखको दावी
रेडियो धादिङ, धादिङअसोज १२ । व्यवस्थापिका संसदका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले विश्वको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी समावेसी संविधान बनेको दावी गर्नुभएको छ । चितवनको सौराहामा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराव नेपालको ११ औँ सधारणासभा तथा राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन
स्वास्थ्य सेवामा धादिङ उत्कृष्ट ।
रेडियो धादिङ,धादिङ असोज १२ । पाँचौं हेल्थ अवार्ड २०७२ जिल्ला अस्पताल धादिङलाई प्रदान गरिएको छ । स्वास्थ्य खवर पत्रिकाको ५ औ वार्षिकउत्सवको अवसरमा अर्थक्वेक हिरोज शिर्षकमा जिल्ला अस्पताल धादिङलाई उत्कृष्ट अवार्ड प्रदान गरिएको हो ।
विश्व मुटु रोग दिवश धादिङ पनि मनाईयो ।
रेडियो धादिङ,धादिङ असोज १२ । “मुटुमैत्री वातावरण सृजना गरौं” भन्ने नाराका साथ सचेतनामुलक कार्यक्रम सहित १५ औं विश्व मुटु दिवश मङ्गलबार धादिङ सहित देशभर मनाईएको छ । नेपाल हृदयरोग निवारण प्रतिष्ठान धादिङ शाखाको आयोजनामा स्वास्थ्यकर्मीहरु विच
नाकाबन्दीपछिको अवस्थाबारे छलफल गर्न सरकारी टोली दिल्ली जाँदै ।।
रेडियो धादिङ, असोज ११ । भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीको बारेमा छलफल गर्न आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापा नेतृत्वको उच्चस्तरीय टोली सोमबार नयाँ दिल्ली जाने भएको छ । तीनदिने भारत भ्रमणमा सरकारले मन्त्री थापाको नेतृत्वमा एक टोली पठाउन लागेको
असोज ११ , प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि सुरु हुने पितृ पक्ष अर्थात् सोह्र श्राद्ध सोमबारदेखि सुरु भएको छ । आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्मका सोह्रवटा तिथिमा दिवङ्गत पितृलाई सम्मानका साथ तर्पण, सिदादान र पिण्डदान
मेस्सीद्धारा धादिङका भुकम्प पिडितहरुलाई सहयोग !
रेडियो धादिङ, धादिङ असोज १० । विश्व फुटबल इतिहासमा नाम कमाएका लियो मेस्सीले धादिङका भुकम्प पिडितहरुलाई सहयोग गर्नुभएको छ । लापाबाट विस्थापित भई ढोला ७ मा अस्थाई शिविरमा बस्दै आएका ५६ घर धुरीलाई फुटबलर मेसीले सहयोग
अब एड्सको पनि उपचार
असोज ९ । संसारमा सबैभन्दा घातक एड्स रोगबाट अहिलेसम्म लाखौँ मान्छेको मृत्यु भइसकेको छ । मानिसको शरीरमा एचआइभी भाइरस संक्रमण भएपछि अन्तिम अवस्थामा लाग्ने रोग एड्स हो । एड्स ९ब्क्ष्म्क – एक्वायर्ड इम्युनो डिफिसीएन्सी सिन्ड्रोम० जसले